8 800 600-54-97 ဒါမှမဟုတ်ရေးပါ service.floristum.ru/en
<% product.width%> စင်တီမီတာ
<% product.height%> စင်တီမီတာ
ပန်းပွင့်ပေးပို့ <% product.deliveryTime? product.deliveryTime: '2h from' ။ %>
သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး parameters တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ကြိုးစားပါ။
စတော်ဘယ်ရီ (စတော်ဘယ်ရီ) - 29 pcs ။
လတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များ၏ပန်းစည်းကျွန်ုပ်တို့၏အလှပြင်ဆိုင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါသင်သည်လှပသောလေထုနှင့်ချက်ချင်းလတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များ၏ရနံ့များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ ပန်းစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ပန်းများကို visit ည့်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရွေးချယ်သည်။ Harmony မှပန်းစည်းများသည်မယုံနိုင်လောက်သောမွှေးကြိုင်သောရနံ့ရှိပြီးအမြဲတမ်းထူးခြားသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာမှပြန်ဆိုထားသောပန်းစည်းတစ်ခုသည်“ ဖဲကြိုးနှင့်ချည်ထားသောပန်းများတစည်း” ဖြစ်သည်။ Florists Harmony - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှပြင်ဆိုင်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခု (သို့) ပန်းစည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုထားလိုက်တယ်။ အရောင်သည်သဟဇာတဖြစ်သောပန်းစည်းကိုဖန်တီးရာ၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ပန်းစည်းတစ်ခုသည်ကွဲပြားခြားနားသောပန်းများသို့မဟုတ်အရောင်များကိုတူညီသောအကွာအဝေးအမျိုးမျိုး၏ပုံဖြစ်သည်။
3562 XNUMX ₽ စတော်ဘယ်ရီပန်းစည်း
နှင်းဆီ - 39 pcs ။
စတော်ဘယ်ရီ (စတော်ဘယ်ရီ) - 25 pcs ။
လတ်ဆတ်သောပန်းပွင့်များ၏ပန်းစည်း, ငါတို့အလှပြင်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်, သင်သည်ချက်ချင်းလှပသောလေထုနှင့်လတ်ဆတ်သောဖြတ်ပန်းပွင့်များ၏ရနံ့သို့ထိုးပါလိမ့်မယ်။ each ည့်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပန်းစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ပန်းကိုတစ် ဦး ချင်းစီရွေးချယ်သည်။ သဟဇာတမှပန်းစည်းအမြဲမယုံနိုင်စရာအနံ့ရှိသည်, သူတို့ကထူးခြားတဲ့! ပြင်သစ်ဘာသာမှပြန်ဆိုထားသောပန်းစည်းတစ်ခုသည်“ ဖဲကြိုးနှင့်ချည်ထားသောပန်းများတစည်း” ဖြစ်သည်။ ပန်းအလှပြင်သူများ၏သဟဇာတ - ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်သည်သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖွဲ့စည်းမှုသို့မဟုတ်ပန်းစည်းကိုဖန်တီးစေသည်။ အရောင်တစ်သဟဇာတပန်းစည်းဖန်တီးခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
3899 XNUMX ₽ အရည်ရွှမ်းပန်းစည်း
စတော်ဘယ်ရီ (စတော်ဘယ်ရီ) - 12 pcs ။
ပန်းသီးပင် - ၇ စင်း
Ruscus -7pcs
ဘုရ်ှသည်ထ -5pc ။
ငါတို့အလှပြင်ဆိုင်ထဲ ၀ င်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းကလှပပြီးလှပတဲ့ပန်းပွင့်လေးများရဲ့လှပတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချက်ချင်းနစ်မြုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပန်းစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ပန်းများကို each ည့်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရွေးချယ်သည်။ Harmony မှပန်းစည်းများသည်မယုံနိုင်လောက်သောမွှေးကြိုင်သောရနံ့ရှိပြီးအမြဲတမ်းထူးခြားသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာမှပြန်ဆိုထားသောပန်းစည်းတစ်ခုသည်“ ဖဲကြိုးနှင့်ချည်ထားသောပန်းများတစည်း” ဖြစ်သည်။ Florists Harmony - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှပြင်ဆိုင်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခု (သို့) ပန်းစည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုထားလိုက်တယ်။ အရောင်သည်သဟဇာတဖြစ်သောပန်းစည်းကိုဖန်တီးရာ၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ပန်းတစ်ပွင့်သည်ပန်းတစ်ပွင့်နှင့်ပန်းတစ်မျိုးတည်း၏ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများဖြစ်သည်။
4456 XNUMX ₽ အရသာရှိတဲ့ပန်းစည်း
ဖွဲ့စည်းမှုကိုသင့်ဆန္ဒအလျောက်ဖြည့်နိုင်သည်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသောရွေးချယ်နိုင်သောပန်းများ၊ အလှဆင်ပစ္စည်းများ၊ လက်ဆောင်ဖဲကြိုးများနှင့်ထုပ်ပိုးမှုများကိုအထင်အရှားပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်နိုင်သောထူးခြားသည့်ပန်းစည်းတစ်ခုကိုစီစဉ်နိုင်သည်။ သငျသညျအရသာ add ဖို့သကြားလုံး, ကတ်များနှင့်ကျပ်ကစားစရာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
3999 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
စတော်ဘယ်ရီ (စတော်ဘယ်ရီ) - 21 pcs ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းစည်းများသည်အားလပ်ရက်များကိုမှတ်မိစေရန်၊ တောက်ပ။ ရောင်စုံစေပါသည်။ သူတို့ဟာတကယ့်အစစ်အမှန်၊ ထိုကဲ့သို့သောပန်းပွင့်ဘုရင်မသည်မည်သူ့ကိုမျှလည်းလည်းချန်မထားခဲ့ပါ၊ အကြောင်းမှာလက်ဆောင်တစ်ခုအနေဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရောင်ဖြင့်နှင်းဆီကိုရရှိခြင်းသည်မည်မျှထူးခြားသည်ကို ထောက်၍ ။ သူတို့ထဲကပန်းစည်းတစ်ခုသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်တစ်ခု၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်သို့မဟုတ်ချစ်ရသူတစ် ဦး ကိုပျော်ရွှင်စေရန်ရိုးရိုးလေးနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ အလှတရား၏ရှုပ်ထွေးဆုံးအကျွမ်းတဝင်ရှိသူများပင်ပြုံးကိုမကူညီနိုင်ပါ။
3552 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
ထူးခြားဆန်းပြားသောပန်းများပန်းပွင့်များ - အဖြူ cymbidium သစ်ခွ5pcs, leucospermum3pcs, craspedia6pcs, ambrella 1 pc, aspidistra3pcs, salal 1/2 pack, သရက်သီးသစ်သီး3pcs ။
7750 XNUMX ₽ ပန်းများနှင့်သစ်သီးများနှင့်အတူခြင်းတောင်း "အရည်ရွှမ်းသောသရက်သီး"
နှလုံးသေတ္တာ 20 * 10 - 1 pc ။ လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီ - 500 ဂရမ်။ လေး - 1 pc ။
2950 XNUMX ₽ လက်ဆောင်ဖွဲ့စည်းမှု "စတော်ဘယ်ရီနှလုံးသား"
လတ်ဆတ်သောစတော်ဘယ်ရီ 1 ကီလိုဂရမ်။ - ပီစီ ၁ ခု။ Tish စက္ကူ - 1 pc ။ ခြင်းတောင်း - 1 pc ။
5750 XNUMX ₽ စတော်ဘယ်ရီခြင်းတောင်း
2784 XNUMX ₽ စတော်ဘယ်ရီပန်းစည်း
2937 XNUMX ₽ ကဗျာ
2937 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
စတော်ဘယ်ရီ (စတော်ဘယ်ရီ) - 69 pcs ။
5713 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
စတော်ဘယ်ရီ (စတော်ဘယ်ရီ) - 101 pcs ။
10947 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
ချောကလက် - 13 pc ။
4510 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
5598 XNUMX ₽ စတော်ဘယ်ရီပန်းစည်း
3850 XNUMX ₽ လက်ဆောင်တောင်းခြင်းတောင်း
အလေးချိန် ၇ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့အိတ်ကြီးတစ်ခု။ ကောင်းသောစိတ်နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားသည်။
7850 XNUMX ₽ ကြီးမားသောသစ်သီးခြင်းတောင်း
5950 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
6950 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
သစ်သီးများ, မွှေးကြိုင်ပန်းစည်း။ ရာသီအလိုက်ချယ်ရီသီးကိုအစားထိုးနိုင်သည်။
4420 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Nut စန်း။ ခြောက်သွေ့သောအသီးများနှင့်အခွံမာများသည်အမြဲအရသာရှိပြီးကျန်းမာပါသည်။
3950 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
အရသာ berry သီးပန်းစည်း
8250 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
8965 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
4230 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
အရသာရှိသောချိုချဉ်များနှင့်ပန်းများနှင့် Berry ဟာပန်းစည်း
9150 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Raphaela နှင့် Berry ဟာပန်းစည်း
6560 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
2550 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
2950 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
စတိုင်ထုပ် box ကို
9350 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
5450 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
အဆိုပါစတော်ဘယ်ရီစန်းဆက်လက်!) စတော်ဘယ်ရီနှင့် Lisianthus ။
အရသာရှိသောရေးစပ်သီကုံး - လိမ္မော်နှင့်အတူအိတ်များ။
2150 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
3890 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Berry ဟာ Hatbox ။ ဘလူးဘယ်ရီချယ်ရီစတော်ဘယ်ရီ Phalaenopsis Hatbox
3340 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Berry ဟာ Hatbox စတော်ဘယ်ရီဘလူးဘယ်ရီ Macaroons Raspberries Roses အစိမ်းရောင် Hatbox
7340 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
အခြောက်လှန်းသောသစ်သီးခြောက်တစ်လုံးပါ ၀ င်သည့်ပန်းစည်း Giant သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အရသာရှိပြီးအရသာရှိပါသည်။ အခွံမာသီး Macadami Lime နေ့စွဲများ2အမျိုးအစားသုတ်တံများချယ်ရီသီးလှော်မြေပဲ Persimmon Honey
7900 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
နာနတ်သီး - 1 pc ။
သလဲသီး - 1 pc ။
Citrus - ၃ ယူနစ်။
စပျစ်သီး -2pcs ။
သစ်တော် -2PCs ။
3290 XNUMX ₽ သစ်သီးလက်ဆောင်ခြင်းတောင်း
မည်သည့်အခါသမယများအတွက်တစ် ဦး က fruity ပန်းစည်း!
3550 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
2850 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
4012 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
3341 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
4280 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
3878 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
7500 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
သီးနှင့်ပန်းပွင့်နှင့်အတူစတော်ဘယ်ရီ box ကို
4683 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
4549 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
5354 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
ချောကလက်ဖုံးလွှမ်းသောစတော်ဘယ်ရီနှင့် chamomile chrysanthemum နှင့်အတူ box
နှင်းဆီပန်းနှင့်အတူစတော်ဘယ်ရီ box ကို
3744 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
5622 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
4817 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
ချောကလက်နှင့်စတော်ဘယ်ရီနှင့်ပန်းပွင့်နှင့်အတူစတော်ဘယ်ရီ box ကို
8037 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
6695 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀